Concrete Batching Equipment Vatengesi uye fekitori - China Concrete Batching Equipment Vagadziri
Iyo simiti inoumbwa ne batching system, kuyera system, kusanganisa system, yemagetsi control system, pneumatic control system uye nezvimwe. Zvitatu zvikamu, hupfu imwe, imwe yemvura yekuwedzera uye mvura inogona kungoerekana yaiswa uye yakasanganiswa nemuti.
Iyo simiti inoumbwa ne batching system, kuyera sisitimu, kusanganisa system, yemagetsi control system, pneumatic control system uye nezvimwe zviyero, hupfu, mvura yekuwedzera uye mvura inogona kungoerekana yakwidzwa uye yakasanganiswa nemuti.
Nheyo yemahara chimiro, iyo michina inogona kuiswa yekugadzira mushure mekuti saiti yebasa iwedzerwe uye kuomeswa. Kwete kwete chete kudzikisa hwaro hwekuvaka, asiwo kupfupisa iyo yekumisikidza kutenderera
Yekumusoro-kumhanya njanji yakatsaurwa kongiri batching chirimwa
Kugamuchira musanganisi wepamusorosoro, kugadzirwa kwepamusoro kugadzira, kutsigira akawanda marudzi fo kudyisa tekinoroji, inokodzera akasiyana siyana kongiri yekusanganisa zvido, mabhodhi ekumisikidza uye mashizha anotora alloy kusakara-kusagadzikana zvinhu, nehupenyu hwakareba hwehupenyu.
Iyo yakakodzera kugadzirwa kwekuvakwa kwemvura, uye yakasarudzika mamiriro inosangana nezvinodiwa zvemvura enviroment.